Just marka aad ku faraxsan tahay oo faraxsan kadib markii phone cusub naftaada helay yihiin, aad ogaato in wareejinta xiriir iyo macluumaad kale oo ka qalab Lumia jir in aad telefoon cusub socda ee Android ma fududa. Waa hagaag, ha ka welwelin, sida waxaa jira siyaabo of fogaado dhibaato this.
Kala beddelashada xiriirada ka Lumia ah si ay Android ah waa hab aad u ballaaran. Sidoo kale, waxay u baahan tahay user u leedahay in qaar ka mid ah knowhow farsamo. Geedi socodka ka kooban yahay labo talaabo. In tallaabada ugu horraysa, xiriirada ka qalab Lumia ah in la dhoofiyo account Muuqaalka iyo soo bixi oo ah qaab file .csv ah. Markaas in tallaabo labaad, tani file .csv baahan yahay in la uploaded in xiriir Google. Marka xiriirada ayaa lagu kaydiyaa xisaabta Gmail ah, user ay u baahan tahay inay la soo wareegto si uu qalab Android oo isticmaalaya xisaab isla Google in ay leeyihiin dhammaan dadka ay khuseyso uu synced in xeeladdiisii ​​Android.
Halkan waxaan ka hadli doonaa laba hab aad uga fudud ee ka Lumia wareejinta xiriirada si Android in this article.
Xiriirada Transfer isticmaalaya Wondershare MobileTrans
Xiriirada Transfer isticmaalaya Muuqaalka iyo MobileGo
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan xiriirada ka Lumia in Android
Talaabada 1: On screen Start ee aad telefoonka Lumia, dusheeda hoos uga mari hormariyo All Settings kaabta. Saxiix in aad xisaabta Microsoft ka dibna dooro xiriirada in ay gurmad. Sida caadiga ah aad telefoon si toos ah dib doonaa xiriir si aad u account microsft aad.
Talaabada 2: Open Wondershare Mobiletrans, dooro Soo Celinta ka kaabta hab on interface ka, ka dibna dooro OneDrive ka fursadaha.
Talaabada 3: Saxiix ee xisaabtaada OneDrive oo ha barnaamijka file gurmad Scan. Marxaladani waxay dhowr ilbiriqsi qaato. Connect aad iPhone in kombiyuutarka, markaas barnaamijka u aqoonsadaan si toos ah.
Talaabada 4: Dooro Xiriirada iyo guji Transfer bilow. Cinwaanka waxaa loo wareejin doonaa telefoonka Android in dhowr ilbiriqsi.
Si aad u wareejin xiriir la isticmaalayo Muuqaalka ah warsan waxaad u baahan tahay awood badan doonistiisa, waqtiga iyo tamarta ay weheliyaan PC ah, phone Lumia ah iyo xiriir internet oo firfircoon. Raac tilmaamaadkan si ay u bilaabaan:
Si aad u hagaagsan xiriirada ka Nokia Lumia in account Muuqaalka aad, raac tallaabooyinkan:
1. Aado "Dadka" app telefoonka daaqadaha, wad ilaa hoos si loo helo "..." iyo ka dibna tag "Settings."
2. Laga shaashadda oo u muuqata, hel "Accounts" oo xulo "dar xisaabta ah".
3. Laga bilaabo shaashadda soo socda, si ay u tagaan "Microsoft Account" oo geli Muuqaalka warsan password iyo saxiixato.
4. Dhammaan xiriirada ee Lumia la synced doonaa account Muuqaalka aad.
5. Si aad u hesho kuwaas oo xiriir aad laptop ama computer, u tag web browser oo nooca in https://login.live.com . Gal adiga oo isticmaaleya isticmaale username account Microsoft iyo password.
6. Marka aad ku gasho, hel "Dadka" in aad xisaabta.
7. cinwaanka buugga ayaa kor u furi doonaa oo waxaad arki doontaa in dhammaan xiriirada ka Lumia haatan noqon doonaa in aad xisaabta Microsoft.
8. Waxaad tagtaa maareynta> dhoofinta in Outlook.com iyo adeegyada kale. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad gasho meel aad rabto waxaad badbaadin file .csv aad tahay oo kaliya in la abuuro. Ku qor meesha aad joogto ah iyo ku dhuftay geli muhiim ah oo file .csv ah lagala soo bixi doonaa meesha in.
Haddaba dajiyaan xiriirrada Muuqaalka in telefoonka aad Android, qaabkan soo socda:
1. fur biraawsarkaaga iyo nooca in www.gmail.com . Gal Gmail isticmaalaya email iyo password.
2. Tag Gmail Xiriirada.
3. Laga bilaabo bar menu hogaanka u helo "More" (soo socda si ay u dar xiriir). Tag More, dhibic ka hoos menu in furay, dooro "Import".
4. Riix "Dooro File" oo la helo file .csv kaliya aad u badbaadiseen. Ka dib markii xulashada faylka, ku dhacay "Open".
5. xiriirada aad hadda ku badbaadi in aad xisaabta Gmail. Hadda, saxiixo in si qalab Android adiga oo isticmaalaya isla Gmail xisaabta aad ku badbaadi xiriirada si. Doorasho syncing waxaa horay u suurta marka aad saxiixdo shubo xisaabta markii ugu horeysay.
Si aad u dajiyaan xiriirada ka Outlook in aalad Android aan gelinaya in dadaal badan oo buugga, uu raaci doonaa habraaca fudud:
1. Download Wondershare MobileGo in aad laptop ama computer. Sug rakibo si ay u buuxiyaan oo ay maamulaan MobileGo.
2. Isku telefoonka aad Android in aad laptop ama computer via cable USB. MobileGo u muujin doonaa ka dib markii la aqoonsado.
3. Laga bilaabo menu ku tagay, Xiriirada xusho.
4. Tag dejinta xiriir Import ka kumbiyuutarada la> ka Outlook 2003/2007/2010/2013. Dooro "Import" oo sug nidaamka si uu u dhameystiro ka dibna jari lahaayeen qalab Android aad ka laptop ama computer.
Waxaan ka kooban liiska qalabka Android ugu caansan ee la isticmaalo ee dalka Maraykanka. Codeeyaan qalabka kaas oo hadda ku jira isticmaalka iyo aad nooga caawiso go'aan guusha kama dambaysta ah.
1. Samsung Galaxy qod6 (ama qod6 Edge)
2. HTC Mid ka mid ah M9
6. LG G awooddiisa 2
7. Huawei kori Mate 7
10. HTC Isha doonayay oo
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Lumia in Android